Ikuphi ingxenye enhle kakhulu ye-Danube Cycle Path? > Ngebhayisikili
↓ Yeqela Kokuqukethwe Okuyinhloko
Manje i-Danube Cycle Path
Isiteji sesi-5 Melk - Krems
Intwasahlobo ku-Danube Cycle Path e-Wachau
Ibhilikosi liyaqhakaza eWachau
Ibhilidi elingemuva incithakalo
Iyini i-Danube Cycle Path?
I-Danube ingumfula wesibili omude eYurophu. Iphuma eJalimane futhi igelezela oLwandle Olumnyama.
Kukhona indlela yamabhayisikili eduze kweDanube, indlela yomjikelezo weDanube.
Uma sikhuluma nge-Danube Cycle Path, sivame ukusho umzila ohamba kakhulu osuka ePassau uya eVienna. Ingxenye enhle kakhulu yale ndlela yomjikelezo eduze kweDanube iseWachau. Ingxenye esuka eSpitz kuya e-Weissenkirchen yaziwa njengenhliziyo ye-Wachau.
Uhambo olusuka ePassau luya eVienna luvame ukuhlukaniswa ngezigaba eziyi-7, isilinganiso esingamakhilomitha angama-50 ngosuku.
Ukuhamba ngebhayisikili phansi nge-Danube Cycle Path kuhle kakhulu.
Kuhle kakhulu ukujikeleza ugudla umfula ogeleza mahhala, isibonelo eWachau osebeni oluseningizimu yeDanube usuka e-Aggsbach-Dorf uya e-Bacharnsdorf, noma udlule e-Au usuka e-Schönbühel uye e-Aggsbach-Dorf.
ngezinsuku ezingu-7 Passau Vienna
Endleleni ye-Danube Cycle Path
Ukuhamba ngebhayisikili okuphephile (abagibeli bamabhayisikili baphila ngokuyingozi)
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi. Uma uqhubeka nokusebenzisa iwebhusayithi, sizothatha imvume yakho.OKInqubomgomo Yemfihlo